China Hupamhi 900-1130mm UPVC Trapezoid Plastic Roof Sheet vagadziri uye vanotengesa | JIAXING
5800mm, 11800mm kana yakagadzirirwa
Mudziyo Mutoro chinzvimbo
SQ.M./20 FCL (21 Matani)
SQ.M./40 FCL (26 Matani)
Ruvara Ichena, bhuruu, girini, beige, terra-cotta grey kana yakagadzirirwa
Unhu Guarantee Makore makumi matatu
3 dura Yekupisa Yakaputirwa UPVC Roof Sheet inogadzirwa zvichienderana ne3 dura co-extrusion tekinoroji ne-imwe-nguva yekugadzirisa. Icho chakanakira zvekuvakisa zvemapurojekiti ekuvaka aine kupisa kupisa chinodikanwa. Iri rinotevera runyorwa rweakasiyana maficha eimwe nhurikidzwa yezvinhu.
Chekutanga rukoko: mamiriro ekunze anodzivirira resin inosarudzwa senge yepamusoro dura zvinhu kuvharidzira iro rezuva ultraviolet mwaranzi uye kudzikisa coefficient yekupisa conductivity. Inopa yedu UPVC padenga pepa nekugara kukuru uye kwemakemikari ngura kuramba;
Yechipiri dura: yepakati dhizaini yakasarudzika furo chimiro ine kupisa uye kurira kwekudzivirira zvesimba.
Chechitatu rukoko: iyo yepasi danho rekushisa kwedu yakasungirirwa UPVC padenga pepa inotora yakachinjiswa PVC zvinhu kuti ipe optimum simba uye kuomarara.
JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD inotungamira inogadzira iyo Spanish ASA padenga jira, UPVC padenga jira, APVC padenga jira, PC jira, FRP jira nemadziro emadziro muChina, Yakagadzwa muna 1998,.
Iyo inovhara nzvimbo inopfuura makumi mana emamirimita emamirimita. Tiine vashandi vanopfuura mazana maviri uye gumi nembiri mitsara yekugadzira, 6 ari kuvakwa, tinogona kugadzira matani makumi masere pagore.
Isu tinogamuchira nemoyo wese vatengi vekare nevakuru kune bhizinesi kutaurirana, kutaurirana uye kubatana kubatana!
Pashure: kureba wave pvc plastiki padenga jira 1070 hupamhi hwepurasitiki padenga
Zvadaro: Roma Rudzi ASA chakaita zvokugadzirwa ResinPvc Roof Sheet
UV Kuvharira Solid Polycarbonate PC Sheet
T900mm UPVC trapezoid yepurasitiki yekudenga sheet
UV kudzivirirwa yakajeka compact yakasimba polycarbonate ...
High Impact Nemishonga Huchi Kama Comb Polycarbonate ...
polycarbonate nemakadhibhokisi jira girinihausi polycarb ...